The new iPad Air will haveaUSB-C connector instead ofalightning cable. ﻿
The new iPad Air will haveaUSB-C connector instead ofalightning cable.
ထွက်ရှိလာမည့် iPad Air အသစ်တွင် Lightning Cable အစား USB-C connector ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သောမတ်လအတွင်း Apple ဟာ ကာလအတန်ကြာရပ်နားထားပြီးနောက်တွင် iPad Air ပုံစံ အသစ်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါတွင် စတုတ္ထမျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ့် ထိုပစ္စည်း ဟာ ပုံမှန်ပါနေကျ lightning connector အစား USB-C အားသွင်းပေါက်နဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒေါ်လာ ၆၀၀ခန့်ရှိမယ့် ဒီ iPad Air ဟာ Apple ရဲ့ထုတ်ကုန်များထဲမှ အလယ်အလတ်တန်းစား Tablet တစ်လုံးဖြစ်ပြီး မကြာမှီကာလများအတွင်း ဒီစီးရီးအတွင်းကနောက်ထပ်မော်ဒယ်အသစ် တစ်ခုကို တွေ့မြင်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mac Otakara ဟုခေါ်တွင်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးသတင်းပေးသူရဲ့အဆိုအရ တရုတ် supplier များက ဒီ စတုတ္ထမျိုးဆက် iPad Air တွင် USB-C connector နဲ့ထွက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟု တိုက်ရိုက်အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
iPad Air3ဟာ iPad Pro 2019 ရဲ့ ဒီဇိုင်းအပေါ်တွင်အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု ထုတ်ကုန်အသစ်ဟာလည်း ဒီစီးရီးကိုပဲအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြေရှိနေပါတယ်။ Otakara ရဲ့ ပြောဆိုချက်အရတော့ ဒီ iPad Air4ဟာ iPad Pro 11 ကို ပိုမိုပေါ့ပါးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ် ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။